Sawirro..Warbaahinta DF-ka Oo Isku Fahmi La’ Xil Ka Qaadistii Kheyre | Xaqiiqonews
Sawirro..Warbaahinta DF-ka Oo Isku Fahmi La’ Xil Ka Qaadistii Kheyre
Go’aankii kalsooni kala noqashada Kheyre ayaa durba sababay isku dhax yaac laga dareemay hay’daha dowladda gaar ahaan warbaahinta qaranka oo qoraaladooda laga dheehan karay.
Waxaa baraha bulshada gaar ahaan facebook lagu baahiyey fariimo whatsapp-ka isku dhaafsadeen, agaasimaha Radio Muqdisho Yaxye Cali Faarax iyo tafatiraha Cabdinaasir Daahir Sabriye.
Qoraalka la baahiyey waxaa ka muuqday Yaxye Cali oo ka dalbanaya tafatiraha iyo wariyaasha in aysan qorin warka la xariira magacaabis uu sameeyey ku simaha ra’iisal wasaaraha Mahdi Guuleed oo qof cusub u soo magacaabay xoghayaha xafiiska joogtada ee ra’iisal wasaaraha.
Mahdi Guuleed oo loo magacaabay ra’iisal wasaaraha ku meel gaark ah ayaa durba xafiiska xoghayaha ra’iisal wasaaraha u magacaabay nin magaciisu lagu sheegay Cabdi Risaaq Caato oo qaraabo dhaw ay yihiin madaxweyne Farmaajo.
Ra’iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa muuqaal uu soo duubay ku sheegay in uu aqbalay kalsooni kala noqoshada ay Barlamaanka Soomaaliya u codeeyeen, isagoo sheegay in uu dalkiisa ugu adeegay hab daacad ah muddo dhan 1247 maalin oo uu xilka haayey.